Askeri ka Tirsan ciidamadda AMISOM oo lagu helay kiis kufsi gabar Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah – Madal Furan
Hoy > Warka > Askeri ka Tirsan ciidamadda AMISOM oo lagu helay kiis kufsi gabar Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah
Askeri ka Tirsan ciidamadda AMISOM oo lagu helay kiis kufsi gabar Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah
Muqdisho(Madal Furan) Askariga lagu magacaabo Raphael Olinga oo ka tirsanaa Ciidamada AMISOM eek a hawl gala waddanka Soomaaliya ayaa shaqadiisa ku waayey kadib markii lagu helay kiis kufsi ah oo uu u geystay gabar da’deedu aad u yar tahay oo 14 sano jir ah.
Raphael Olinga ayaa ka mid ahaa ciidamadda AMISOM ee ka soo jeeda dalka Ugaandha waxaana amar ka soo baxay Taliska ciidanka Milatariga dalka Uganda ay shaqada kaga fariisiyeen askerigaas maadaama uu kursi u geystay gabar 14 sano jir ah oo aan weli qaangaarin.
Maxkamadda Ciidamadda Ciidamadda dalka Ugaandha ayaa baaritaan kadib caddeysay in Raphael Olinga uu galay kiiska lagu soo oogay ee kufsiga ah, Talliyaha Taliyaha Maxkamadda Ciidanka Uganda Jen. Andrew Gutti ayaa sheegay in ninkaas lagu xukumay in laga saaro liiska ciidamada, isla markaasna uu ka badbaaday xukun xabsi daa’im ah.
Moses Wandera ,oo ah Agaasimaha Xeer Ilaalinta Ciidanka dalka Uganda ee Soomaaliya ayaa sheegay in todobaad ka hor waaliddiinta Gabadhaas ay diideen in ay la kulmaan Mas’uuliyiinta Ciidanka Uganda,waxaana uu sababta ku sheegay in gudaha Soomaaliya kusfiga uu ka yahay ceeb iyo sumcad dil qoyskaas ku dhacday,islamarkaana aysan dooneyn in bulshada ogaato.
Waalidiinta gabadhan la kufsaday ayaa ka dalbaday AMISOM iyo Taliska ciidanka Uganda in la siiyo lacag badan si ay uga tagaan Soomaaliya maadaama arinkooda la ogaaday sharaf dhacna ay ku tahay.
Ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya ayaa mararka qaar lagu eedeeyaa in kufsi iyo dhibaatooyin kale u geestaan haweenka, waxaana Ciidamada AMISOM hore looga digay in ay kufsi u geestaan ama xiriir la sameeyaan haweenka.
Ergeyga Qaramada Midoobey oo dowladda Soomaaliya ka dalbaday wixii ka dhacay Baydhabo iyo sababta loo xiray Mukhtaar Roobow.
Wasiirka Waxbarashada dalka Kenya oo loo magacaabay Aamino Maxamed
Madaxweyne Farmaajo oo kulan fool ka fool ah madaxtooyada Puntland kula yeeshay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.